Mutauro wakashata wezvimwe zvikamu zveCarpool Karaoke ndicho chikonzero chikuru chekunonoka kwekutanga kwayo | Ndinobva mac
Carpool Karaoke anga ari wechipiri, uye kwekanguva kubheja kwekupedzisira pane wega kugadzirwa kwezvinhu zvepakutanga. Pakutanga kwegore, Apple yakataura kuti ibudise paApple Music zvikamu zvakasiyana zveicho chaicho Chiratidziro Chemapurogiramu, chiratidziro chaicho Apple yakanayisa tsvimbo dzakawandaKutanga nevatauri, avo vanga vasingazive kuti chii chinonzi kukudziridza chishandiso kana basa racho.
Kuedza kwechipiri, uko kwakakundawo kushoropodzwa kwakawanda, kunyangwe kusvika padiki pane iko Carpool Karaoke, chirongwa uko vakakurumbira vakasiyana vakatora mota vachitaura nezvebasa ravo, vachiita majee Iyi nhepfenyuro yakatanga kuratidzwa zviri pamutemo muna Nyamavhuvhu 8 uye vhiki rega rega Apple inopa chitsauko chitsva chaicho paApple Music.
Zuva rakatanga kurongerwa kuburitswa kwechikamu chekutanga chaive Kubvumbi. Asi, sekudzidza kwakaita Bloomberg, chikonzero chikuru chekunonoka kweiyi nhepfenyuro nyowani chaive nekuda kwekuti Tim Cook aida kubvisa mutauro wakashata uye unonyadzisa wakaonekwa mune zvimwe zvezvikamu, kumanikidza kambani kubatanidzazve zvikamu nekucheka izvo "zvisingadiwe" zvikamu. Sezvo isu tichigona kuverenga muBloomberg
Mazuva Apple asati aronga kupemberera kuvhurwa kweterevhizheni yake yechipiri mwaka wadarika pahotera yeHollywood, CEO Tim Cook akaudza vatevedzeri vake kuti mafaro aifanira kumirira. Mutauro wakasviba uye mareferenzi kuhutsanana hwemunhukadzi zvaifanira kuchekwa kubva kune zvimwe zvikamu zveCarpool Karaoke
Shanduko iyi inogona kusanganisira mhando yemutsara wekuteedzera unozoteverwa nezvose zvakagadzirwa naApple kubva zvino zvichienda mberi, saka kana zvazosimbiswa, Apple inongogadzira zvemukati zvinogona kunakirwa nemhuri, zvichisiya zvese bonde nemhirizhonga, izvo zvinogona kukonzera budiriro yeako akateedzana kuve ehukama. Izvi hazvireve kuti bonde kana mhirizhonga zvinodikanwa kana kana muchigadzirwa, asi kana tikamira kuti tione kubudirira kukuru kweNetflix kana HBO, tinoona maitiro epabonde nemhirizhonga zviri chikamu chavo, kunze kweStranger Zvinhu, zvinhu se vari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Mutauro wakashata wezvimwe zvikamu zveCarpool Karaoke ndicho chikonzero chikuru chekunonoka kwekutanga kwayo